Amathuluzi wemfundo ku-KDE: KLettres | Kusuka kuLinux
Amathuluzi wemfundo ye-KDE: KLettres
KDE inikeza uchungechunge lwamathuluzi noma izinhlelo zokusebenza zokusetshenziswa kwezemfundo ezisukela kokuyisisekelo kakhulu kuye kwezinzima kakhulu futhi kulolu chungechunge lwezihloko sizoqala ukubona ezinye zazo.
Ngabe ufuna ukufunda ukukhuluma isiNgisi noma isiFulentshi? Isinyathelo sokuqala ukufunda isichazamazwi, futhi KLettres isicelo esizosisiza ngendlela elula yokusebenzisa ukuzwa kwethu.
Ngokuzenzakalelayo inezilimi eziyi-7, phakathi kwazo: inglés, IsiFulentshi, isiNtaliyane y ISpanishi, kanye namazinga amane okusebenza. Esokuqala zisifundisa izinhlamvu ngokwehlukana, kanti lezi zokugcina ngamagama aphelele.
Konke okuyisisekelo, kepha ukuqala ngakho kuhle kakhulu, ikakhulukazi kwencane yendlu. Le phakheji, njengoba ngikutshele ekuqaleni, ifakiwe kwimodyuli Yezemfundo ye KDE futhi ungathola eminye imininingwane ku- lesi sixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Amathuluzi wemfundo ye-KDE: KLettres
Siyabonga ngendatshana u-Elav. Yilezi zinhlobo zamathuluzi okufanele sizithuthukise ezikhungweni zethu zemfundo nokuthi, ngeshwa, bambalwa kakhulu othisha abazi ngazo. Kungaba nentshisekelo ukuthuthukisa i-athikili lapho kwethulwa khona ezinye zalezi zicelo, njengeMarble, iQuantum Gis noma iKicad
Kuyadabukisa ukuthi akazi ukuthi angasebenza kanjani kahle nalezi zicelo, kepha ake sibone ukuthi yini esingayenza .. Kodwa-ke, uma umuntu enolwazi, wamukelekile ukuluhlanganyela 😀
Ngisebenzise ezimbili zokuqala kancane, kepha angilokothi ngitshele isipiliyoni sami. Kubonakala kuwumthwalo omkhulu kimi.
Umsebenzi wabantu esigabeni se-K-Edu uhlale ubonakala umkhulu kimi, ngoba kungenzeka ungabi nomthelela omkhulu njengezinye izinhlelo ezivame kakhulu njenge-Amarok nezinye, kodwa impela ziyadingeka kakhulu.
Lokhu kugxile kakhulu kuzethameli zezingane noma ukuqala kakhulu ngolimi, kepha ngisebenzisa ezinye zezinhlelo ze-Edu, ezinjengeParley, uhlelo lwamakhadi ukufunda amagama amasha, ungasebenzisa lawo asevele enziwe, uwaqedele noma wakhe abanye, inezinhlobo eziningana zokuzivocavoca umzimba. Kuphelele ngokuphelele, futhi ngijabule kakhulu ukuyisebenzisa.
Ngiyavuma ukuthi bengingaqondi kahle ukuthi uParley usebenza kanjani
Wonderful, ngiyabonga ngethiphu
Futhi ngabe kukhona umuntu oseke wayisebenzisa? Nginentshisekelo enkulu yokufunda ukubiza igama lesiFulentshi r.
Ngiyabonga u-Elav ngokungikhuthaza kokuthunyelwe kubhulogi (engingeke ngikuthumele lapha ngoba ngeke ngibe ugaxekile, kodwa ngikuqambe lokhu okuthunyelwe kukho).
Ngingumfundi wekhono lezemfundo futhi, ngenhlonipho yami ejulile ngabathuthukisi, bayizinhlelo zemfundo, kepha hhayi ukusetshenziswa esikoleni (okungenani eMfundweni yamabanga aphansi) ngoba ithatha indawo yencwadi. Lawa mathuluzi awavumeli indlela "entsha" efana ne-Problem Based Learning (apb http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_problemas) noma ukufunda ngokubambisana, ngoba kugxilwe ngakunye. Noma kunjalo, ziwumthombo omuhle wokubukeza uhlobo oluthile lokuqukethwe noma ukukusebenzisa lapho izingane "zingenalutho olungcono olungazenza": P.
Ngingathanda futhi ukwengeza ukuthi amaCenter amaningi (okungenani eSpain) awanawo amakhompyutha asebenza ngokufanele i-KDE (awawenzi kahle ama-W7 futhi awathwala ngokuzenzakalela) ukuze asetshenziswe ku-WXP noma ku-LXDE, kepha hhayi e-Edubuntu ngobumbano noma nge-KDE ngoba uthatha unomphela ukuvula noma yiluphi uhlelo lokusebenza.
Sengiphetha, yimidlalo engingabeka izingane zami (uma nginazo) ukuthi ziyibuyekeze, kodwa hhayi ukuthi ziyisebenzise ekilasini.
PS: Usuku Lobaba Oluhle noma ngubani olutholayo !! 😛
Uxolo ngokuthunyelwe kabili. Bengifuna ukukutshela (ngoba angikwazi ukuhlela) ukuthi ngikususile ukubalulwa kwalokhu okuthunyelwe (ngivele ngathi kungikhuthazile, angikopisanga lutho kukho) ngenxa yenkinga yokungaziwa kwe-Intanethi, ngoba ngithanda ukungakahleleki ngokwengeziwe kumasayithi lapho ngingena khona ukuze ngibe nesikhathi esihle (esinjengalesi). Ngiyethemba awunankinga.
Awekho ama-boobs !!? Yeka ihlazo, luhlobo luni lwe "Imodi Yabantu Abadala" ngaleso sikhathi!?
Ungasiguqula kanjani isandiso seFirefox bese wenza i-.xpi?